ထိုင်းနိုင်ငံ၌ COVID-19 ဗီဇပြောင်း အိုမီခရွန် ပထမဆုံး အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်ခံရမှု တွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ဗျူဟာမြောက်ကာကွယ်ဆေး ပေးသွင်းသူအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံအား ရွေးချယ်မှုက မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း၌ အထောက်အကူပြုစေရန် တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းထားသော ကာကွယ်ဆေးအသစ်များ ရောက်ရှိလာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကူးစက်ခံရမှုစုစုပေါင်း ၄၃ သန်းကျော်သို့ရောက်ရှိ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ကလေးငယ်များအတွက် Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် အတည်ပြု
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကို ပုံမှန်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောရောဂါအဖြစ် သဘောထားရန် အစီအစဉ်အား ခွင့်ပြု
ဘန်ကောက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း Kalasin ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် အိုမီခရွန် ပထမဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက် ကူးစက်ခံရမှုအား တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများက ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။Kalasin အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော အိုမီခရွန်ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် အတည်ပြုလူနာ ၂၂ ဦးရှိကြောင်း COVID-19 အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာန (CCSA) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှု၏ ဖော်ပြချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကွာရန်တင်း (quarantine) ကင်းလွတ်သည့်အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှ လာရောက်ခဲ့ပြီး ယခုလအစောပိုင်းက အိုမီခရွန် ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သော စုံတွဲတစ်တွဲကြောင့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း CCSA ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Apisamai Srirangsan ကဆိုသည်။
၎င်းတို့ နိုင်ငံအတွင်းသို့ရောက်ရှိလာပြီးကတည်းက အဆိုပါ စုံတွဲသည် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘားများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် အစိုးရရုံးများအပါအဝင် နေရာအများအပြားသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြကြောင်း Apisamai မှ ပြောကြားပြီး ၎င်းတို့နှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့မှုကြောင့် လူ ၁၀၀ ဝန်းကျင်မှာ ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်မြင့်မားသည်ဟု ယူဆရကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စုစုပေါင်း ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် အိုမီခရွန် ကူးစက်မှုမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် ညပိုင်းအထိ ၂၀၅ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယမန်နှစ်အစောပိုင်းက ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း ၂,၂၀၄,၆၇၂ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၂၁,၅၂၈ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BANGKOK, Dec. 24 (Xinhua) — Thailand reported its first cluster of the Omicron variant of COVID-19 in the northeastern Kalasin province, health officials said on Friday.
According to the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), there are 22 confirmed cases of the Omicron variant linked to the Kalasin cluster.
The index case of the latest cluster was believed to beacouple who travelled from Belgium through Thailand’s quarantine free scheme and tested positive with the Omicron variant earlier this month, CCSA spokeswoman Apisamai Srirangsan said.
Since their arrival, the couple visited several places including bars, shopping malls and state offices in the province, Apisamai said, adding that around 100 people were still deemed at high risk due to their close contact with the patients.
According to officials, the total cases of the Omicron variant in Thailand had risen to 205 as of Thursday night.
Fears of rapid spreading of the new variant had triggered Bangkok city hall to announce the cancellation of its New Year countdown events on Thursday.
Since the start of the pandemic early last year, Thailand has registered 2,204,672 COVID-19 cases, with 21,528 cumulative deaths. Enditem
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွင် လေတပ်မှ MiG-21 တိုက်လေယာဉ် ပျက်ကျ